Kala Qeybsanaan Ka Muuqata Sida Looga Falceliyay Doorashada Jubbaland | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Wararka Kala Qeybsanaan Ka Muuqata Sida Looga Falceliyay Doorashada Jubbaland
Doorashooyiinka ka dhacay Maamul Goboleedka Jubbaland ee Soomaaliya waxaa ka dhalatay falcelin iska soo horjeedo, kuwaasi oo ay ka bixiyeen, dowlad-goboleedyo, xisbiyo mucaarad ah iyo weliba dowlad deris la ah Soomaliya.
Shalay oo ay taariikhdu ku beegneyd 22 August 2019, waxaa magaalada Kismaayo ka dhacay doorasho uu ku guuleystay Axmed Madoobe, halka Cabdirashiid Xidig uu sheegay in isagana loo doortay xilkas.
Doorashooyiinka Jubbaland oo tan iyo bilowgii qabanqaabada hannaanka uu hareeyay khilaaf xooggan oo sababay iney dhismaan laba guddi doorasho, laba baarlamaan iyo “seddax madaxweyne”.
Haddaba natiijooyinka doorashooyiinkaas ka soo baxay ayaa looga falceliyey siyaaba iskhilaafsan. Dowladda Federaalka Soomaaliya oo doorashada Jubbaland ka falcelisay waxay sheegtay inaysan aqoonsaneen doorashooyinkii ka dhacday maamul goboleedka Jubbaland.
Warsaxaafadeed ay dowladda federaalka ka soo saartay doorashada Jubbaland waxay ku sheegtay in ay “ka walaacsan tahay, kana xun tahay” waxa ay ku tilmaamtay “is-caleemo saar baalmarsan habraaca doorashooyiinka, dastuurka iyo shuruucda” Soomaaliya.
Warsaxaafadeedka waxaa ku qoran in “ay caddaysay in aanay aqoonsanayn natiijooyinka kala duwan ee kasoo baxay Magaalada Kismaayo”.
Waa “Shaqsiyaad kala duwan oo mid weliba gaarkiisa u sheegtay inuu yahay Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland”, ayey tiri wasaaradda arrimaha Gudaha Soomaaliya.
Wasaaradda waxaa kale oo ay war saxafadeedka ku sheegtay in ay “aqoonsan karta oo kaliya doorashooyiin loo dhan yahay, lagu qanacsan yahay oo ay ka qayb qaateen dhammaan musharrixiinta Baarlamaanka, Shir guddoonka iyo Madaxtooyada oo ku saleysan xor, xalaal, hufnaan, laguna wada kalsoonan karo, kuna dhacda jawi nabdoon ayna goob joog ka yihiin dowladda Federaalka iyo Beesha Caalamka.”
Warkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya ayaa imanaya xilli Magaalada Kismayo ay ka dhacday doorasho uu ku guuleystay Axmed Madoobe iyo mucaaradka oo sheegay in ay Cabdirashiid Xiddig doorteen. Dowladda Kenya oo iyaduna doorashada ka dhacday maamul goboleedka Jubbaland warsaxafadeed ay kaga falcelineyso soo saartay waxay ku sheegtay “iney u hambalyeyneyso madaxweyne Axmed Madoobe oo markale xilka madaxweynanimada loo doortay.”
Warsaxafadeedka oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ayey ku qortay “iney si weyn ugu ammaaneyso dadaalka ay guddoonka baarlamaanka Jubbaland, Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan, hoggaamiya dhaqameedka, culamaa’udiinka iyo bulshada rayadka sida wanaagsan oo ay u suurageliyeen in doorasho xor oo si nabadgelyo ah ku dhacday ay ka qabsoonto Jubbaland.”
Dowladda Kenya, waxaa kale ay war warsaxafadeedkeeda ku sheegtay “in shacabka Jubbaland ay la wadaageyso farxadda iyo doorashada sida nabadgelyada ah u dhacday kuna soo gabgaboowday.”
Dowladda Kenya ayaa maamul goboleedka Jubbaland ee Soomaaliya ugu baaqday “iney si dhow ula shaqeyso dowladda federaalka si waafaqsan dastuurka Soomaaliya iyo shuruucda dalkaasi u yaallo si ay horseed ugu noqdaan dib u heshiisiin.”
Madaxtooyada dowlad goboleedka Puntland waxay soo saartay warsaxafadeed ay ugu hambalyeyneyso Madaxweyne Axmed Madoobe.
Waxaana warsaxafadeedka lagu sheeegay “Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo ku hadlaya magaca golayaasha dowladda iyo dhammaan shacabka inuu hambalyo u dirayo Madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaan oo lagu doortay caasimadda ku meel gaarka Jubbaland ee Kismaayo.”
Waxaana warsaxafadeedka Puntland lagu sheegay “inuu u madaxweynaha uu khilaafka gudaha Jubbaland uu wadahadal ku dhammeeyo.”
Waxaa sida oo kale warsaxafadeedka lagu baaqay Dowladda federaalka iyo Jubbaland wixi khilaaf ee ka dhaxeeya ee doorashada ka dhashay ay dhammeeyaan.
Xisbiga mucaaradka ee wadajir ayaa sida oo kale warsaxafadeed ku saabsan natiijada doorashada Jubbaland soo saaray.
Wuxuuna xisbigu warsaxafadeedkiisu “uu ugu hambalyeeyey madaxweynaha ay sheegeen in loo doortay maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan (Madoobe).”
Wuxuuna sheegay xisbigu “inuu madaxweynaha guul uu u rajeeynayo isla-markaana uu ilalaiyo midnimada iyo wadajirka Soomaaliya iyo tan Jubbaland.”
Wuxuuna Xisbigu uu “dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedka Jubbaland uu ugu baaqay iney wadahadal ku dhammeeyaan khilaafka dhexdooda ah.”
Xidig: “Aniga aya ah madaxweynaha sharciga ah”
Qaabkee ayay u dhacday doorashada guddoonka baarlamaanka Jubbaland?
Maantana waxaa isla magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ee dowlad goboleedka Jubbaland lagu doortay madaxweynihi seddexaad kaasoo loo doortay Cabadinaasir Seeraar.
Previous articleQaybo Kamid ah Deegaano Ku Yaal Dalka Ciraaq oo Israa’iil Duqeyn Ka Gaysatey.
Next articleJabuuti Oo Ururka Iskaashiga Islaamka Ka Taageraya Xubin Ka Noqoshada Gollaha Ammaanka.